Nnukwu ozi maka njem nlegharị anya na Palestine: ụlọ oriri na ọ Bethụ Bethụ Bethlehem gbara akwụkwọ maka ekeresimesi
Home » Na-agbasa News Travel » Nnukwu ozi maka njem nlegharị anya na Palestine: ụlọ oriri na ọ Bethụ Bethụ Bethlehem gbara akwụkwọ maka ekeresimesi
Minista na-ahụ maka njem nlegharị anya na Palestine Rula Maaya kwuru na ụlọ oriri na ọlehemụ Bethụ niile dị na Betlehem gbara akwụkwọ zuru oke, obodo ahụ kwadoro ndị njem 10,000 “ịtụnanya” n’abalị Mọnde.
Ndị njem ala nsọ si gburugburu ụwa na-aga Betlehem na Mọnde maka ihe a kwenyere na ọ ga-abụ emume Krismas kachasị ukwuu nke West Bank na afọ.
Ọ sịrị, “Anyị ahụbeghị ọnụ ọgụgụ dị ka nke a kemgbe ọtụtụ afọ,” ka o kwuru, na-agbakwụnye na nde mmadụ atọ bịara Betlehem n’afọ a gafere narị puku kwuru puku afọ gara aga.
Ndi nno ihu na ndi nleta nke obi uto gabigara ma hu ha isi nke rosaries dika ha batara na uka, ikuku juputara na ihe nsure oku.
Ọtụtụ narị ndị ime obodo na ndị ọbịa si mba ọzọ fegharịrị na Manger Square ka ndị Palestine Scouts na-egwu bagpi na-agagharị nnukwu osisi Krismas. Ìgwè mmadụ jupụtara na Chọọchị nke N'ihe ngosi nke Ọmụmụ ahụ, na-asọpụrụ dị ka ebe ọdịnala a mụrụ Jizọs, na-echere ịgbada na grotto oge ochie.
"Ọ dị njọ ịnọ ebe ọ malitere," ka onye ọbịa si Germany na-a coffeeụ kọfị kọfị n'ihu otu akpụrụ akpụ nke Meri Nwanyị Mary na-atụgharị nwa ọhụrụ ahụ bụ Jizọs.
Ememe ekeresimesi na-ewetara Ndị Kraịst nọ n'Ala Nsọ ọdịmma nke ezumike, nke ọnụọgụ ha arịgola ọtụtụ iri afọ gbasara ndị mmadụ n'ozuzu ma ugbu a, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole.
Choirs gụrụ egwu na ukwe a ma ama, olu ha na-ada ebe niile.
Ndị ntorobịa Palestaịn rutere ndị njem nleta na okpu Santa ha, windo ụlọ ahịa ha na-ejidekwa ihe ịrịba ama na-agụ “Jizọs Nọ n’Ebe Ahụ” gosipụtara ihe ngosi nke ọmụmụ olive na ihe ncheta ọmụmụ Kraịst.
Achịbishọp Pierbattista Pizzaballa, onye ụkọchukwu ụka Roman Katọlik kachasị na Ala Nsọ, banyere Betlehem mgbe ọ gafesịrị ebe ndị agha Israel si na Jerusalem.
Na Mass nke etiti abali na Church of the Nativity, Pizzaballa gwara otutu ndi na-efe ofufe na ndi a ma ama tinyere onye isi Palestine Mahmoud Abbas na Prime Minister Rami Hamdallah.
Pizzaballa kwuru, "N'afọ gara aga dị egwu, na-ekwu maka mbuso agha ime ihe ike n'etiti ụmụ Israel na ndị Palestaịn," yabụ anyị niile na-eche na ihe niile ruru unyi.
Ma ọ bụrụ na i wepụ ájá a, anyị ga-ahụ ka ọmarịcha Mozis si dị mma. ” “Ebe ọ bụ na ọ bụ ekeresimesi, anyị kwesịrị inwe nchekwube,” ka achịbishọp kwuru.
Palestine dị mma maka njem nleta. A na-ekwughachi ihe a mgbe niile kemgbe ọtụtụ afọ ma bụrụ eziokwu n'agbanyeghị esemokwu na-aga n'ihu
8 gburu, 22 merụrụ ahụ: jackgbọ ala eji apụnara mmadụ abanye na igwe mmadụ na Longyan, China
Gọvanọ Puebla nke Mexico na di ya nwụrụ na mberede ụgbọ helikopta a na-akpọ Christmas Eve
Fttù Lufthansa na-azụta ụgbọ elu 10 na-arụ ọrụ nke ọma ogologo oge
Akụkọ njem Uganda
Uganda kwụsịtụrụ njem na ịpụ India
Nevis na-agbakwunye ụkpụrụ nduzi njem